I-USB entsha ishaja yamadoda into eqhelekileyo esifubeni
Umgangatho ophezulu kunye nengubo yefashoni yomnxeba wengxowa yomzimba we-nylon, iimpahla zelinen ye-nylon zineempawu zokuziphindezela kwamanzi, ukuxhathisa ukuxhathisa kunye nokuchasa.
Isingxobo esitsha esiphathwayo se-anti-theft bag egxekileyo eqhelekileyo yangaphandle yegadi ye-diagonal
Isinxibo somgangatho ophezulu kunye nobume bendawo yokuhlala kwindawo enobuhlobo, ubungqina obungamanzi, ukunqatywa kukungakhuseleki kunye nokuthintela iinyembezi. Yenzelwe ibhegi enkulu enomthamo omkhulu kunye neengxowa ezininzi ezisebenzayo.
Umhlaba awungowokubona, kodwa wokuhamba. Isikhwama sokuhamba esinemfashini kunye nefashoni senziwe ngesambatho esikhethiweyo esinemveliso ephezulu engenamanzi, esinokunganyani, ubushushu obuphezulu, ukuphefumla kunye nokukhululeka. Uyilo olunomthamo omkhulu lunokugcina inani elikhulu lezinto ezinje ngokunxiba iimpahla zobuqu, iikhompyuter, iifowuni eziphathwayo, iiambrela, njl. Njl., Kwaye ingxowa engaphezulu ye-zipper inokugcina iifowuni eziphathwayo, iikhompyuter zeethebhulethi, kunye nezitshixo kunye nezinye izinto ukuze zisetyenziswe lula nakweyiphi na. ixesha.
Uyilo olwahlukileyo lomntu, kusetyenziswa izixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye ezinobuhlobo bemeko yePU, ukhetho lwangaphakathi lwe-velvet ethambileyo kunye ne-velvet, isiphelo esiphakamileyo, isithukuthezi esidumileyo. Kukho izinto ezininzi ngaphakathi ngaphakathi, ezilungele ukugcina amakhonkco, imigexo, imilebe yomlomo, isacholo, iiwotshi, njl njl, ikuvumela ukuba uhlele kwaye ugcine izinto.
Ingxowa yelaptop yamadoda nabafazi yishishini lencwadi
Izixhobo ezikumgangatho ophezulu: Ingaphandle yale bhegi yolwelwe yenziwa ngeflash ye-Oxford esemgangathweni ophezulu, kwaye ngaphakathi yenziwa ngelaphu elithambileyo le-velvet cushion.
Ukuthengiswa kwemida eshushu enomda othengisayo ongenamanzi ipU ibheji yamadoda yaseBritani yekholeji yasekhohlo yangaphandle
Ngoyilo olubambekayo, le backpack yelaptop inegumbi eliphambili eliphambili elinokuhlala iilaptops phantsi kwe-15,6 intshi, kunye neencwadi, iimpahla kunye nezinye izinto zemihla ngemihla.
Incwadana yamaphepha enamadoda kunye nabasetyhini ibhegi yesikhombisi
Into Hayi. ywssd-002 Impahla ye-Oxford yelaphu evala indlela yokuvula umsebenzi Ukusebenza kwamanzi, ukuphefumla, ukunxiba, ukumelana nokusetyenziswa kwesini / amadoda kunye nabasetyhini Model elula yomjikelo womlomo isitayile iphethini isitayile saseKorea Ubunzima obuthambileyo Imithwalo yemithwalo Ukuphakamisa izinto ezithambileyo zemoto Ukukhanya kombala oLula isitayile-ejikeleze uMlomo-Mpunga, isitayile esiLula-oMjikelezo-oMnyama-opinki, isitayile esilula -Round Mouth-Blue, Isitayile esijikelezayo-kuMjikelezo oMnyama -Mnyama ...
I-Multifunctional usb yokuhamba ibacket ephethe ingxowa yephepha lekhompyuter
Icandelo elinemisebenzi emininzi, le bhegi yecomputer ibandakanya iipokethi eziphambili zangaphakathi kunye neepokotshi ezisecaleni, ezinokubonelela ngendawo eyahlukeneyo yecala lakho lefowuni, ifowuni ephathekayo, i-iPad, isitshixo, isikhwama, ibitter, iincwadi, iimpahla, iibhotile, njl. Fumana ngokulula oko ukufunayo. Ipokotho yangaphambili inokubamba izinto zakho ukuba zifikeleleke ngokulula.